आतंकवादले अमेरिकालाई अल्जेरियाको लागि यात्रा सल्लाह जारी गर्दछ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » अपराध » आतंकवादले अमेरिकालाई अल्जेरियाको लागि यात्रा सल्लाह जारी गर्दछ
अल्जेरिया ब्रेकिंग न्यूज • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • अपराध • समाचार • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
अमेरिकी सरकारको वेबसाइटले यात्रीहरूलाई आतंकवादको कारण अल्जेरियामा यात्रा गर्दा बढि सावधानी अपनाउन चेतावनी दिन्छ।
अमेरिकी विदेश विभागले आज अल्जेरियाको लागि आतंकवादको कारण ट्राभल सल्लाहकार जारी गरेको छ। सरकारी वेबसाइटले यात्रीहरूलाई आतंकवादको कारण अल्जेरियामा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन चेतावनी दिन्छ। केही क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ।
सल्लाहकारले यात्रा नगर्न सल्लाह दिन्छ:
- आतंकवादका कारण पूर्वी र दक्षिणी सीमाना नजिकका क्षेत्रहरू।
- आतंकवादको कारण सहारा मरुभूमिमा क्षेत्रहरू।
- आतंकवादी समूहहरूले अल्जेरियामा सम्भावित हमलाहरूको षडयंत्र गरिरहे। आतंकवादीहरूले थोरै वा कुनै चेतावनी बिना आक्रमण गर्न सक्छन् र भर्खरै अल्जेरियन सुरक्षा फोर्सहरूलाई निशाना बनाए। धेरैजसो आक्रमणहरू ग्रामीण क्षेत्रमा हुन्छन्, तर भारी र सक्रिय प्रहरी उपस्थितिको बावजुद सहरी क्षेत्रमा आक्रमणहरू सम्भव छ।
अमेरिकी सरकारका कर्मचारीहरूले यात्रामा अल्जेरियन सरकारले प्रतिबन्ध गरेकाले अमेरिकी सरकारले अल्जियर्स प्रान्त बाहिर अमेरिकी नागरिकहरूलाई आपतकालीन सेवाहरू प्रदान गर्ने सीमित क्षमता छ।
मा सुरक्षा र सुरक्षा सेक्सन पढ्नुहोस् देश जानकारी पृष्ठ.
यात्रा सल्लाहकार यात्रुहरूलाई चेतावनी दिन्छ यदि तिनीहरूले अल्जेरिया भ्रमण गर्ने निर्णय गरे:
- प्रमुख शहरहरू बाहिरका स्थानहरूमा जाँदा स्थानीय प्रहरीलाई सूचित गर्नुहोस्।
- सम्भव भएमा हवाले यात्रा गर्नुहोस्; मुख्य राजमार्गहरूमा रहनुहोस् यदि तपाइँ सडकमा यात्रा गर्नुपर्दछ।
- सम्मानित ट्राभल एजेन्टहरूसँग यात्रा गर्नुहोस् जुन क्षेत्र जान्दछन्।
- मुख्य शहरहरू र पर्यटन स्थानहरूको बाहिर राति बस्न बेवास्ता गर्नुहोस्।
- मा भर्ना गर्नुहोस् स्मार्ट यात्री नामांकन कार्यक्रम (STEP) सतर्कताहरू प्राप्त गर्न र आपतकालमा तपाईंलाई अवस्थित गर्न सजिलो बनाउँनुहोस्।
- मा राज्य को विभाग को पालन गर्नुहोस् फेसबुक र twitter.
- समीक्षा गर्नुहोस् अपराध र सुरक्षा रिपोर्ट अल्जेरिया को लागी।
- अमेरिकी नागरिकहरू जो विदेशमा यात्रा गर्छन् सधैं आपतकालीन परिस्थितिको लागि आकस्मिक योजना हुनुपर्दछ। समीक्षा गर्नुहोस् यात्री चेकलिस्ट.
पूर्वी र दक्षिणी सीमानाहरू
ट्युनिसियाको सिमानाको km० किलोमिटर (50१ माईल) भित्र र २ 31० किलोमिटर (१ 250 माईल) भित्र लिविया, नाइजर, माली, र मॉरिटानियाको सीमा आतंककारी र आपराधिक गतिविधिहरूको कारणले गर्दा ग्रामीण इलाकाहरूमा यात्रा गर्न नखोज्नुहोस्।
सहारा मरूभूमिमा ओभरल्याण्डको यात्रा
आतंकवादी र आपराधिक समूहहरू सहारा मरुभूमिमा काम गर्दछन्। सहारा भ्रमण गर्दा हामी सल्लाह दिन्छौं कि हवाईजहाजबाट मात्र यात्रा गर्नु हो न कि भूमिबाट।
अमेरिकी सरकारको वेबसाइटको लागि भ्रमण गर्नुहोस् उच्च जोखिम यात्रीहरू.
वेलबिङ म्यागजिनले केन क्लाडोरिसलाई फिचर गर्छ
यस एपको साथ भिडियो हेरेर पैसा कमाउनुहोस्
गोताखोरहरूले DEMA शोमा बहामासमा उच्च चासो देखाउँछन्